ओलीको आरोपः डा. केसीसँग सम्झौता गरेर विद्यार्थी विदेश सप्लाई गर्नेलाई साथ दिए देउवाले
तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ यहाँ। स्कुल, क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीविहरु मौन छन्।
पुस १६, २०७८ ९:०७
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीसँग नौ बुँदे सम्झौंता गरेर विदेशमा विद्यार्थीहरुलाई सप्लाई गरेर कारोबार चलाउनेहरुलाई साथ दिएको टिप्पणी गरेका छन्।
शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले नेपालमा नर्सिङ कलेज खोल्न नपाउनेलगायतका सहमति गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले पैसा नहुने नेपालीका छोराछोरीको मेडिकल कलेज पढने सपना बर्बाद पारेको गम्भीर आरोपसमेत लगाए।
उनले डा. केसीसँग प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको सम्झौंताले विदेशमा पैसा र छोरीछोरी पठाउने कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याएर नसक्नेको जीवन बर्बाद पारिएको तर्क गरे। उनले स्कुल, कलेज बन्द गर्न सो सम्झौंता भएको र त्यसबारे बुद्धिजीविहरुले मौनता साँधेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।
उनले सरकारकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको र बैंकहरुमा तरलताको अभाव देखिएको दावीसमेत गरे। अध्यक्ष ओलीले भने, ‘हिजो प्रधानमन्त्रीले एक जना कुन डाक्टरसँग नौं बूँदे सम्झौंता गरे रे! ७ वटा माग पूरा गर्न नौं बूँदे सम्झौंता। त्यो सम्झौता किनभने यहाँ नर्सिङ क्याम्पस चलाउन पाइँदैन।
नत्र भने विदेशमा विद्यार्थी पठाउने कम्पनीहरु बर्बाद हुन्छन्। त्यसकारण विदेश पढ्न पठाउनलाई यहाँ खोल्न नदिने। सक्नेले पैसा र छोराछोरी बाहिर पठाउ, नसक्ने बर्बाद होऊ। तर विदेशको विद्यार्थी सप्लाईको कारोबार चलाउनु परेको छ यहाँ। स्कुल, क्याम्पस बन्द गर्नु परेको छ। बुद्धिजीविहरु मौन छन्। अर्थतन्त्र ध्वस्त छ।’
अध्यक्ष ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति संकेत गर्दै इज्जत नभएकाहरु सधैं सरकारमा रहने अवस्था रहेको भन्दै व्यंग्य पनि गरे। उनले आफ्नो पार्टीले भने सरकारमा बसेर आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढने वा प्रतिपक्षमा रहेर गलत नीतिको विरोध गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने गरेको दावी गरे।
उनले भने, ‘अलिकति इज्जत छोडने हो भने त जहिले पनि सरकारबाट हट्नु नपर्ने अवस्था छ। जस्तो प्रचण्डजीहरु हट्नुहुन्न। म हुँदा पनि उहाँहरु सरकारमै हुनुहुन्छ। काँग्रेस हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अर्को हुँदा पनि सरकारमै हुनुहुन्छ। अलिकति इज्जत छोड्यो भने जहिले पनि सरकारमा बस्नुपर्ने खालको अवस्था।
इज्जतसाथ मात्रै कि सरकारमा हुन्छ, कि प्रतिपक्षमा। कि आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्छ, कि गलत नीतिका विरुद्ध लड्छ।’ अध्यक्ष ओलीले माओवादी जनयुद्धका कारण रोजगारीको खोजीमा धेरैजसो युवाहरु विदेश जानु परेको औंल्याउँदै अब त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य भएको पनि बताए।